13 Dariiqo oo Bartilmaameedka Muuqaalkaaga Xayeysiinta ah | Martech Zone
Jimcaha, Sebtember 18, 2015 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Xayeysiinta bandhiggu waxay kusii socotaa horumarinteeda casriga ah sidii aan horey uga soo hadalnay wareysigeena ku saabsan Xayeysiinta Barnaamijyada ee Pete Kluge ee Adobe. Haddii aad ka fekereyso inaad ku ballaadhiso dallacsiintaada xayeysiinta bandhigga, waxaa jira dhowr waddo oo la heli karo oo lagu beegsanayo aragtidaada xayeysiinta si aad isugu daydo inaad u qabato dhagaystayaal aad u khuseeya, heerarka gujinaya ee sarreeya, iyo beddelaadda la hagaajiyay:
Bartilmaameedka Calaamadaha - adoo qiimeynaya waxyaabaha kujira bogga isla markaana aqoonsanaya magac ama magac soo saar, waxaad ku bilaabi kartaa xayeysiis ku saleysan martida raadineysa alaabadaada ama alaabada tartamayaashaada.
Channel Bartilmaameedsiga - soo bandhig shabakadaha xayeysiinta waxay bixiyaan wadiiqooyin si qarsoodi ah loo dhisay oo loogu talagalay ka-qaybgalka goobaha leh danaha kala duwan. Wararka, ciyaaraha, cuntada, madadaalada, iwm.
Bartilmaameedka Qalabka - xayeysiinta waxaa lagu bartilmaameedsan karaa dhanka mobilada, kaniiniga iyo noocyada bandhigyada ee kaladuwan.
Bartilmaameedka Dadweynaha - da'da, jinsiga, jinsiyadda, hantida, cinwaanka, iyo macluumaadka kale ee dadka.
Beegsiga Juqraafiyeed - dalka, gobolka, degmada, magaalada, xaafadda, koodhka boostada, xuduudaha latitude iyo Longitude ama gacan.
Bartilmaameedka Keyword - bandhig shabakadaha xayeysiiska ayaa aad uga sii fiicnaanaya qiimeynta waxyaabaha ku jira bogga iyo muujinta xayeysiisyada ku habboon ee ku saleysan ereyada muhiimka ah ee ay xusheen xayeysiiyaha.
Bartilmaameedka Dulsaarka - iyada oo ku saleysan habdhaqanka booqashada booqdaha, taariikhda iibsashada iyo ku habboonaanta bogga, xayeysiinta waxaa lagu bartilmaameedsan karaa xiisaha sida isboortiga, karinta, siyaasadda, iwm.
Bartilmaameedka Suuqa - xayeysiis bandhig-waqtiga-dhabta ah oo ku saabsan dalabyada ama alaabooyinka la xiriira marka booqdaha ku sugan yahay bartaada cilmi-baaris ama wax-soo-iibsi.
Dib u noqoshada - markii booqde ku yimaado bartaada kadibna uu baxo, shabakada xayeysiiska waxay leedahay buskud dhinac saddexaad ah oo u oggolaanaya inay ku arkaan iyaga bogag kale oo lagu soo bandhigi karo dalab inay ku noqdaan.
Raadi Dib-u-habeyn - Markuu booqdaha booqdo, booqdo bartaada kadibna tago, shabakada xayeysiiska mashiinka raadinta waxay leedahay buskud dhinac saddexaad ah oo u ogolaanaya inay ku arkaan iyaga raadinta kale halkaasoo lagu soo bandhigi karo dalab inay ku noqdaan.
Bartilmaameedka Goobta - waxaa jira shirkado badan oo tikniyoolajiyad suuqgeyn ah oo raba inay gaaraan dhagaystayaasheena, sidaas darteed waxaan leenahay shabakadeena bandhig iyo bog is-adeegsi halkaas oo xayeysiiyayaashu ka iibsan karaan fikradaha xayeysiinta si toos ah.
Bartilmaameedka Waqti-Ku-saleysan - Waqtiga maalinta, maalin-ka-tegidda, ama dhacdooyinka waqtiga ku saleysan ka dib booqdahaaga oo tallaabo ka qaada goobtaada.
Bartilmaameedka Garaafka Bulshada - caan, saameyn, ku habboonaanta, iyo soo socda.
Nidaamyada cusubi xitaa waxay saadaalinayaan suurtagalnimada booqdaha booqda iyada oo ku saleysan qiimeynta waqtiga-dhabta ah ee soo-booqdaha yimaada iyo muujinta xayeysiinta habboon. Maskaxda ku hay in, xitaa su'aalaha aasaasiga ah, suuqleydu ay dhisi karaan xaalado aad loo bartilmaameedsaday oo ku saleysan isku-dhafka awoodaha bartilmaameedka xayeysiinta bandhigyada kala duwan. Dhammaan shabakadaha xayeysiinta muujinta ma bixiyaan nooc kasta, markaa hubi inaad qiimeyso shabakadda xayeysiiska.
Ka daawo MediaMath.
Tags: shabakadxayeysiinta adbandhig shabakada xayeysiiskabandhig xayeysiis
Oktoobar 13, 2015 at 10:02 AM
Hadda waxaan galaynaa xayeysiis bandhig laakiin waxaan bilownay inaan dhisno tan liisas dib-u-eegis ah. Ololahayagii ugu dambeeyay wuxuu ahaa guul.
Oktoobar 19, 2015 at 9:17 AM
Dib-u-habeynta ayaa ah mid ka mid ah hababka xayeysiinta ee aan ugu jeclahay. Xaqiiqda ah inay horeyba uga ogaadeen astaantaada ayaa ah faa iido weyn adiga iyo doolarka xayeysiinta.
Oktoobar 19, 2015 at 12:34 PM
Waxaan taas ka maqlay dad badan oo suuq geynaya, Steven!